Soosaarka iyo Warshadda Shiinaha ee Dhaqanka-VNS-018CB | LONGSHAN
Dhagaxan Loos / Random
Dhagaxa Dhaqanka-VN ...
1. Way fududahay in la rakibo, oo p ...
Alaabtaan waxaan sidoo kale ugu yeernaa pa baraf cad ...
Waa mid ka mid ah badeecooyinka ugu caansan ee ku jira ...
Xayndaabkan xajmiga ah ee dabiiciga ahi wuxuu ka kooban yahay dee ...
Alaabtaani waa midabbo badan, waxay umuuqataa qurux ...
Magaca Shayga:Slate madow Guddiyo khafiif ah
Cabir:100X360MM / 100X350MM
Miisaanka: 25KG / M2
1.Waa 4 xarigood, wadarta dhererkeedu waa 40cm.interlock 5cm .Qaabka caadiga ah waa Z iyo S .Beesha dhumucdiisuna waa 8-15MM, culeyska waa mid aad u fudud, marka waa sahlan tahay in la qaado oo la dhiso.
2. Gudiga oo dhan waxaa laga sameeyay qalabka dhagaxa. Adagnaanta, cufnaanta iyo iska caabbinta ayaa ah dhoobada dhoobada ah ee aan la barbardhigi karin Waxaana loogu yeeraa sida qalabka cagaaran ee qurxinta sababta oo ah maadada shucaaca oo hooseysa marka la barbardhigo heerka caadiga ah ee Guddiga Caalamiga ah ee Ilaalinta shucaaca.
3. Dusha sare wuxuu wali hayaa dhagaxa dabiiciga ah ee dabiiciga ah iyo midabka ka dib soo saarista, goynta iyo isku dhafka isku dhafka.
Waxaa loo isticmaali karaa codsiyo kala duwan min gudaha ilaa banaanka. Ku dheji burjiga dambe ee jikada, dabka, hilib dubida bannaanka ama derbi beero leh darfaha khafiifka ah.
Ogeysiisyada wax soo iibsiga
1. Fadlan u oggolow khaladka cabirka + -2mm, maxaa yeelay gacan baa lagu gooyaa, Fadlan dalbo amarka haddii aadan dhib ka qabin ， waad ku mahadsan tahay fahamkaaga
2. Fadlan fahan in midabku waxyar ka duwanaan karo farqiga u dhexeeya shaashadda iyo iftiinka awgood.
Maya MOQ, waxaan nahay warshad, waxaad dalban kartaa wax kasta oo waafaqsan heshiisyada baahiyahaaga.
2. Immisa shaqaale ah oo ka shaqeeya warshaddaada?
Warshadeenu waxay leedahay 99 shaqaale
3. Goorma ayaa la aasaasay warshadaada?
Warshaddeena waxaa la aas aasay sanadkii 1988, waxay leedahay in ka badan 30 sano taariikh.
4. Waa maxay dekedda la keenayaa?
Xingang, Tianjin, Shiinaha
5. Waa maxay waqtiga dhalmada?
Guud ahaan 15 maalmood ayaa dhammayn kara hal weel ka dib helitaanka deebaajiga.
Xirmada caadiga ah waa 12pcs / box, 112boxes / santuuqa, 20pallets / container.Waxaan sidoo kale ku waafaqi karnaa codsigaaga xirxirida.
Haddii aad qabtid wax su'aalo ah oo ku saabsan alaabtayada, fadlan nala soo xiriir waqtigeeda, waxaan ku siin doonaa jawaab lagu qanco, ha ku qanacsanaanta macaamilku waxay ahayd hadafkeenna waxaanan sugeynaa baaritaankaaga. Macluumaad dheeri ah, fadlan E-mail noo soo dir:longshanshi@vip.126.com
Hore: Dhagaxa Dhaqanka-VNS-014XCB
Xiga: Dhaqanka Dhagax-VNS-1120MGPB
Mustaqbalka, Longshan Stone wuxuu had iyo jeer u hoggaansami doonaa mabda'a ah 'in dadka loola dhaqmo si daacadnimo ah ...
Hadda Longshan Stone wuxuu u bilaabay suuq, wuxuuna ku guuleystay sumcad aad u wanaagsan.